Ngaba iibhayisekile zombane ziyalunciphisa ngokwenene ushushu lwemozulu?
Njengobungqina obungakumbi nangakumbi obukhokelela kwimpembelelo enkulu yemozulu yabantu, uninzi lwethu lukhangela zonke iindlela ezinokuthi zifikelele kwiinjongo zemozulu. Ezothutho zezinye zezinto ezinegalelo elikhulu kwiigesi zegreenhouse. Ke ngoko, iyavakala into yokuba ukujonga iindlela zokuphucula ...
Ukuphuma kweebhayisikile ezintsha zoMbane eziSebenzayo zoMbane
Izixhobo zoMbane eziSebenzayo zoMbane ziphumile Siyavuya ukwazisa ukuba indawo yethu yokuqala enamafutha eebike ikhutshwe namhlanje. Ngeempawu ezikrelekrele kunye nezinto ezintsha, i-FATGO yethu ingamandla athe cwaka ...
I-Geared Hub Motors Vs IiGearless Hub Motors
ngomphathi ku 21-06-28
Isithuthi esisebenza ngamandla esisebenza ngqo Kukho iindidi ezimbini eziphambili zeemotor hub kwimarike: ii-injini ezilungiselelwe kunye neegiya ezingenagiya (ii-motor hub hub nazo zibizwa ngokuba zii “motor drive ngqo”). Ngenxa yokunqongophala kweegiya, ii-motor hub eziqhuba ngokuthe ngqo zilula kwezi zimbini, ke siza kuqala ...
Intsomi 0f Ebike Wattage
Phantse yonke ibhayisekile yombane yokuthengisa kunye nekhithi yokuguqula i-ebike idweliswe kwinqanaba elithile lamandla, njenge '' 500 watt electric bike '' okanye '' 250 watt ebike conversion kit '', ukanti ngokufuthi eli nqanaba lamandla liyalahlekisa okanye lilungile kucace gca. Ingxaki kukuba abavelisi abayisebenzisi ...